Inverter Factory - China Inverter Abakhiqizi nabahlinzeki
I-Solar Inverter (off grid) isilawuli se-MPPT
Ukucaciswa KwamaLumens ayi-1000
Ukucaciswa kwama-2000 Lumens
Ukukhanya kwelanga kodonga lwe-1000 Lumens
Imoto kagesi & imoto yeGalofu Gel ibhethri amandla amakhulu
SGL07 Series solar otshani ukukhanya 5W
Ukuphakama kokukhanya kwe-G012 ukukhanya kwelanga elangeni ngamabala ...
B008 solar light light_9.7V lithium battery
Ukuphakama kwe-60W kuholele ukusebenza kahle kwe-UFO engadini yelanga
Ukukhanya kwensimu engu-20W yelanga engu-2000
Uchungechunge lwe-PV3500 luvule inverter esebenza kahle
Inverter PV18 VPM 2-3KW yesistimu elanga encane
I-PV1800 PRO series-450v / 240v / 110v off grid syst solar ...
Uchungechunge lwe-EP3300 TLV lucishe i-inverter yesistimu yelanga
Inverter EH9335-80KS ivaliwe igridi ye-volotage enkulu namandla
EH9335-60KS uchungechunge off igridi amandla elanga inverter
I-CAW7 / 11 / 22KE-DCGS mini AC / DC uhlelo lokushaja izimoto
· Ukusebenza kahle kwe-ST inverter kungaphezu kuka-85% · Idizayini entsha, ukuzivumelanisa nogesi obanzi futhi omncane, ibone ngokuzenzakalela imvamisa · Ukuboniswa okugcwele kwe-LED, umsebenzi we-inverter ungakhethwa ngokusetshenziswa kwamakhasimende · Izindlela ezi-3 zokusebenza ziyatholakala: ama-mains priority, inverter priority, imodi yokonga amandla · Izikhathi ezingaphezu kwezingu-3 amandla okuqala aphezulu, amandla amaningi okulayisha · I-Smart fan (lungisa ngokuzenzakalela isivinini sefeni ngokuya ngamazinga okushisa angaphakathi) · Ubuchwepheshe bemvamisa yamandla, i-sine wave AC engen ...
Uchungechunge lwe-EH9335 UPS lunezinhlobo ezintathu ze-UPS ezikwi-inthanethi ezintathu, ezintathu noma ezintathu ezikhethiwe Umthamo womkhiqizo uhlanganisa lonke uhla lwamandla kusuka ku-20kVA kuye ku-80kVA, okulula ukuthi abasebenzisi balungiselele kalula. Lolu chungechunge lwe-UPS lungaxazulula cishe zonke izinkinga zamandla, njengokuphela kukagesi, amandla wedolobha amandla amakhulu, amandla kagesi aphansi, ukwehla kwamandla kagesi, ukunciphisa kwe-amplitude, Izinkinga zamandla ezinjenge-high voltage pulses, ukuguquguquka kwamandla kagesi, ukuqhuma kwamandla, ukuphazamiseka kwe-harmonic, imfuhlumfuhlu ukuphazamiseka, nokushintshashintsha kwemvamisa.
Uhlelo lwebhethri le-Inverter EP2000 PRO UPS
Inverter yochungechunge lwe-EP2000 iyindleko esebenzayo, ihlakaniphile ngomsebenzi we-UPS. I-LCD eningiliziwe inikezela ngokulungiswa kwenkinobho okusebenziseka kalula futhi okufinyeleleka kalula njengokushaja kwebhethri kwamanje, amandla kagesi webhethri, imvamisa, ibhaza njll.
Ilungele umsebenzisi odinga i-inverter elula nokonga, ngokufakwa nokusebenziseka kalula.
I-tower ne-rack design iyatholakala ngezinqumo ezahlukahlukene.
Lolu chungechunge lwesigaba se-inverter EP3300 TLV chungechunge, umthamo osuka ku-1KW-6KW, DC 12V / 24V / 48V, usebenza ezimfuno ze-110VAC / 120VAC zezimakethe, ezifanayo nesigaba esisodwa se-AC 110VAC / 120V, noma isigaba esisodwa se-110VAC / 120V 120V / 240V; Ekubonisweni kwe-LCD, ungasetha amandla wokukhipha, imvamisa, ukushaja amandla, ukushaja kwamanje ukuklama ukusetshenziswa okuhle ngokuya ngezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene zemithwalo; Okwamanje, futhi ungaxhuma isilawuli esengeziwe seshaja yelanga ukwakha uhlelo lwasekhaya lwelanga, usebenzise ukukhanya kwelanga ngokukhululekile futhi ugcine izikweletu zikagesi.
I-PV1800 PRO chungechunge-450v / 240v / 110v ivaliwe igridi yesistimu yelanga
I-PV1800PRO iyi-inverter / ishaja yemisebenzi eminingi, ehlanganisa imisebenzi ye-inverter, ishaja yelanga ye-MPPT neshaja yebhethri ukunikela ngokuxhaswa kwamandla okunganqamuki ngosayizi ophathekayo. I-PV1800 PRO Series ingasebenza ngaphandle kwebhethri. I-Maximum PV array voltage voltage evulekile ingafinyelela ku-500V, futhi i-MPP voltage ingu-150 ~ 450V, engasiza amakhasimende ukuthi ayisebenzise ngokugcwele amandla elanga
Le yi-inverter / ishaja yemisebenzi eminingi, ehlanganisa imisebenzi ye-inverter, i-MPPT50A / 80A ishaja yelanga kanye neshaja yebhethri ukunikela ngokuxhaswa kwamandla okunganqamuki ngosayizi ophathekayo. Isibonisi sayo se-LCD esibanzi sinikeza ukusebenza kwenkinobho okulungiselelwa nokusebenziseka kalula njengokushaja ibhethri kwamanje, okubaluleke kakhulu kwishaja ye-AC / yelanga, namandla kagesi wokufaka amukelekile ngokususelwa kuzinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene.
Uchungechunge lwe-PV3500 yi-inverter esebenza ngemisebenzi eminingi, ehlanganisa imisebenzi ye-inverter ne-MPPT t ishaja yeshaja yelanga, ishaja yelanga neshaja yebhethri ukunikela ngokuxhaswa kwamandla okunganqamuki ngosayizi ophathekayo. Isibonisi se-LCD esibanzi sinikeza ukusebenza kwenkinobho okulungiselelwa nokusebenziseka kalula njengokushaja ibhethri kwamanje, okubaluleke kakhulu kwishaja yelanga, namandla kagesi wokufaka angakhethwa ngokususelwa kuzinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene.
Ikheli: Isitezi sokuqala, isifunda senzhen sokuqala senzuzo eChina.